Har’a ganama, lafa qonnaa Somaaliyaa gama Kibbaatti argamu keessatti duula geggeessameen namoonni 10 ajjeesamanii ka biraan tokko madaa’uu isaa aangawoonni Somaaliyaa dubbatanii jiran.
Magaalaa Moqdishoo irraa gama Kibba-Lixaatti, kiiloo-meetira 55 irratti kan argamtu – magaalaa Bariiree cinatti haleellaa geggeessame kana duuba eenyu akka jiru haga ammaatti ifa hin taane.
Itti-aanaa bulchaan Shabalee Gara Gadii, Alii Nuur Mohammed, Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin, duula san ka geggeesse dhaabbata Naga-eegumsaa dhuunfaa, kan Yunaayitid Isteets, Baankrooft jedhamu akka tahe dubbatan.
Baankrooft, dhaabbata dhuunfaa – humna naga-eegumsa Gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa Al-shabaabiin waraanaa jiruuf loojistikaa fi leenjii kennuutti bobba’ee biyyattii keessaa hojjetaa jiru.
“Loltoonni adiin yokaan faranjiin waraana Somaaliyaa haga tokko waliin ta’uudhaan, lafa qonnaa sana irratti dhukaasa banan. Ijoollee fi ga’eessota dabalee namoota sagal ajjeesan” ka jedhan – itti-aanbaa bulchaan Shabalee gara Gadii kun, namni kurnaffaan otuu wal’aansaaf gara hospitaalaatti geessamaa jiruu karaatti du’uu isaa dubbatan.
Ministatti Ittisaa Somaaliyaa – Abdu-rashiid Mohammed Abdullaahii garuu, Baankirooft haleellaa sana keessaa harka qabaachuu ni haalan.
“Baankrooft biyya kana keessaa loltuu hin qabu. Humnoota alaa ka biroo, kanneen waraana Somaaliyaa wajjiin wal-gargaaruun shororkeessota waraanan tu jira” – ka jedhan – ministarri Ittisaa Somaaliyaa kun, loltoonni kun, namoota hidhatan qonnaa sana keessatti arganii akka hidhannoo isaanii lafa kaayyaan gaafatanii waan didianii dhukaasa itti bananiif jecha, itti dhukaasanii ajjeesuu isaanii dubbatu. Qawween hidhattoota sanaas qabamuu beeksisanii jiran.
Namoonni hidhatan sun qonnaan-bultoota, hidhattoota naannoo sanaa yokaan jara Al-shabaab ta’uu fi dhiisuu isaanii adda-baafachuuf akka qorannaan geggeessamaa jiru illee dubbatan – aangawaan Mootummaa Somaaliyaa kun.
Kaardii filannoo pirezidaantummaa Angoolaa heduutti jiranii paartiin biyya bulchitu MPLA-n ya moone jettee qaata labsatte.
Golli Naga-eegumsaa ka Tokkummaa Mootummootaa fi Gamtaan Afrikaa Finfinneetti Waliin Walga’ii Taa’uuf Jiran